ary mandeha mianavaratra ny dian’izy ireo, raha araka ny fanazavan’i Dadafara Bera, mponina any an-toerana. Mandry andriran’antsy avokoa ny mponina, indrindra ireo zaza amam-behivavy izay voatery mandry any an-tsaha mihitsy. Efa nisy ny fametrahana mpitandro ny filaminana tao amin’ity kaominina ity saingy be no ho ny vitsy izy ireo. Mampiasa paikady hafa mihitsy ireo dahalo amin’ny fisafidianany izay fotoana hidirany ao an-tanàna ka tsy misy sahy manohitra ny mponina. Raha ny fanazavan’i Dadafara Bera hatrany dia tsy ho foana ny fanondranana omby izay nampanantenain’ny filoham-pirenena matoa mbola mahazo vahana tahaka izao ny halatr’omby any ambanivohitra sady mampiahiahy ny lalana hivoahan’izy ireny. Voakasik’ity asan-dahalo ity ihany koa ireo mponina ao Antanetibe Mahazaza Mahitsy.